စတိုင်ကျသောလူဖြစ်ရန် - ဖက်ရှင်ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ စတိုင်ကျသောအမျိုးသားများ
Alicia tomero | | ပုံ, သဘောထားတွေ
သင်ကခေတ်စားတာကြိုက်ပေမယ့် ကျက်သရေရှိမှုကိုအမြဲအမှတ်အသားပြုပါ? ပြေပြစ်။ အဆင့်အတန်းရှိပြီးလက်တွေ့ကျသောလူဖြစ်လာရန်အကောင်းဆုံးအချက်များကိုသိရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ အမြဲစမတ်ကျကျဝတ်ဆင်ပါ ၎င်းသည်ရာစုနှစ်များစွာကျင့်သုံးသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်း၏ပုံစံသည်မပြောင်းလဲပါ၊ သို့သော်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း၎င်းတို့ကိုအခြားအချိန်များနှင့်ကွဲပြားစေသောအရောင်မျိုးစုံနှင့်ဖြတ်တောက်မှုများဖြင့်အခြားပုံတစ်ပုံကိုပေးထားပါသည်။
မင်းရဲ့အရသာကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဦး စားပေးများ၊ သင်၏လူနေမှုပုံစံနှင့်သင်၏မျက်နှာအသားအရေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သောအချက်များစွာရှိသည် မင်းရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုက်ညီတယ်။ နည်းလမ်းရှာဖို့အရေးကြီးတယ် အဝတ်တစ်ထည်ချင်းစီစမ်းကြည့်ပါ ၎င်းသည် ဦး စားပေးဖြစ်သောကြောင့်အသေးစိတ်ကိုသင့်အရွယ်အစားနှင့်လုံးဝလိုက်ဖက်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုအ ၀ တ်သည်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုသင်မသိလျှင် online မှ ၀ ယ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကဲ့သို့လက်ခံသူသည်ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည် မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုမြူးစမ်းပါမရ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရောင်များ၊ အပိုပစ္စည်းများမပါဘဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ ဒါကမင်းရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့သွားတာပဲ။
သင့်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်ရှိလျှင် သင်နှင့်လိုက်ဖက်သောအကောင်းဆုံးအရွယ်အစား (သို့) ပုံစံများကိုရှာပါ၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသည် အခြေခံများယူလာရန်လောင်းပါဒါပေမယ့်မင်းကိုအများကြီးပိုနှစ်သက်စေတဲ့အရာတစ်ခုအမြဲရှိတယ်။ အားလုံးထက်သာတယ် အရည်အသွေးကိုရှာပါ၊ ပိတ်ထည်များနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုကိုသာမန်မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင့်ကိုကွဲပြားစေလိမ့်မည်။
အဝတ်အစားတံဆိပ်များ ၀ တ်ရန်မလိုပါ၊ သင်မခံစားနိုင်သောအရာတစ်ခု ၀ ယ်ရန်မလိုပါ မင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြဖို့ပဲမရ။ မင်းရဲ့ဗီဒိုထဲကအဝတ်အစားတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းမှု သူတို့သည်ကြီးကျယ်သောအမျိုးအစားဖြစ်ရမည်နေ့စဉ်အချိန်တိုင်းတွင်၎င်းတို့ကိုသုံးရန် မင်းမှာအဲဒါတွေအမြဲရှိရမယ် improvise လုပ်နိုင်ရန်၊ ၎င်းတို့ကိုရေးဖွဲ့နိုင်စေရန်လက်ကျန်ငွေကိုရှာသည်။
ကြော့ရှင်းသောယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ဟူသောစိတ်ကူးသည်ကောင်းမွန်သောဝတ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ရုံနှင့်သင်ရှာဖွေမှုပြီးမြောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ ဒီဝတ်စုံကြီးကိုဘယ်လိုဝတ်ရလဲစုံစမ်းပါ ၎င်းတွင် ၀ တ်ရန် ၀ န်နှင့်စတိုင်ရှိသည် ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
ကျက်သရေရှိ အရောင်အလင်းများလွှမ်းမိုးသည်၊ ၎င်းသည်အသံအတိုးအကျယ်ကိုဖြစ်စေသောအရောင်များဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အရပ်ရှည်ပြီးပိန်တဲ့ယောက်ျားတွေမှာကြီးမားတဲ့အားသာချက်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိတယ်။ ဤအရာသည်သူတို့ဖြစ်သည် မှောင်မိုက်တန်ချိန် ၎င်းသည်လူများအားအဝလွန်ခြင်းကိုအမြဲနှစ်သက်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်သည်ပေါ့ပါးသော ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ရန်ရွေးချယ်လျှင် ပို၍ ကောင်းသည် ပေါ့ပါးသောဘောင်းဘီကို ၀ တ်ပါ သင်တတ်နိုင်လျှင်သိပါ ကျဉ်းမြောင်းသောအရာတစ်ခုခုနှင့်ပေါင်းစပ်ပါတင်းကျပ်သည်မဟုတ်၊ ရလဒ်ကိုနှစ်သက်စေသည်။ ထိတ်လန့်စရာနှင့်ပျင်းစရာကောင်းသည့်အရောင်များကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်၊ သင်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရောင်အချို့နှင့်တောက်ပသောအရာတစ်ခုကို ၀ တ်နိုင်သည်။
သတိထားရ သားရေအဝတ်အစားများအသုံးပြုခြင်း၊ သင်ဤပစ္စည်းကိုကြိုက်လျှင်သင်ရမည် ပညာရှိစွာသုံးပါ ၎င်းကိုအပေါ်မှအ ၀ တ်နှင့်အခြားအောက်ခံနှင့်တွဲမသုံးပါနှင့်။ ၎င်းသည်ပိုလျှံလာပြီး၎င်းတို့ကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော် ၎င်းကိုကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှတစ်ခုကိုသာသုံးသည်.
ဖိနပ်သည်ကြော့ရှင်းစွာ ၀ တ်ဆင်ရန်အခြေခံဖြစ်သည်။ သော့ကဝင်နေတယ် သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအားကစားဖိနပ်ကောင်းကောင်းရှိပါစေ y အခြားသူများသည်အလွန်ကြော့ရှင်းစွာ ၀ တ်စားဆင်ယင်သည်မရ။ ငါကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အခါ၊ အဲဒါကိုအခြေခံတွေ ၀ ယ်ရတာမတန်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံနည်းနည်းပိုသုံးဖို့အရေးမပါတဲ့ဖိနပ်တွေကိုသတိပြုသင့်တယ်။ ရေရှည်မှာသူတို့ကဖိနပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် သူတို့သည်သင့်အားနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စေလိမ့်မည်.
၎င်း၏အရောင်သည်အမြဲရှိနေရမည့်ခါးပတ်ကို ၀ တ်နိုင်သည် ဖိနပ်နှင့်အတူသွားပါမရ။ တုပ် အနက်ရောင်ဖြစ်ရင်ပိုထိရောက်တယ် ၎င်းသည်ပိုချော့မော့ပြီးညနေခင်းပွဲများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ AND ရေမွှေးကိုမမေ့ပါနဲ့၊ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်နှင့်အလွန်ယောက်ျားပီသသောရနံ့ဖြစ်ရမည်။
သူတို့ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အမှောင်သံတွေကဘယ်လိုဝတ်စုံတွေဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာငါတို့ပြန်သုံးသပ်ပြီးပြီ။ အထည်နှင့်၎င်း၏ပစ္စည်းများ၏ပြီးမြောက်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိရပေသူတို့သည်လွယ်လွယ်ကူကူမတွန့်ဘဲ၊ သူတို့ကသံမဏိကိုသံမဏိသံဘူးကဲ့သို့အသစ်စက်စက်ခိုင်ခံ့သောဘ ၀ ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဝတ်စုံကို ၀ တ်တဲ့အခါမှာအမြဲရှိသင့်တယ် ဂျာကင်အင်္ကျီခလုတ်များကိုဖြုတ်ပါ သင်သွားရန်သို့မဟုတ်တစ်နေရာရာသို့သွားသောအခါ ထို့နောက်သင်ပြန်ထသောအခါသင်ခလုတ်များကိုထပ်မံတွယ်ရပါမည်။
အ ရှပ်အင်္ကျီများသည်အမြဲတမ်းသံနှင့်ပြီးပြည့်စုံရန်လိုသည်ချည်မျှင် (သို့) သိုးမွှေးထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ အလွန်ကြီးမားသောပုံနှိပ်စက်များကိုမရှာပါနှင့်။ ရိုးရိုးစင်းစင်းရှပ်အင်္ကျီများ ဒါမှမဟုတ်ရင်ပြင်တွေကမျက်လုံးကိုပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူများသည်အာဏာနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယူဆောင်လာသည် အရောင်တောက်တောက်အင်္ကျီများနှင့်မသင့်တော်ပါ။ ထိုနည်းတူအင်္ကျီလက်တိုများသည်လည်းကြည့်ကောင်းမည်မဟုတ်။
ဖိနပ်များသည်အလွန်သန့်ရှင်းရမည်ဘွတ်ဖိနပ် (သို့) ဘွတ်ဖိနပ်ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။ အရောင်များသည်အနက်ရောင်ဝတ်စုံများအတွက်အညိုရောင်ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်မပျက်ယွင်းစေရန်သစ်သားနောက်ဆုံးပေါ်တွင်အမြဲထားပါ။
နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ကချည်ကိုအမြဲပြန်သုံးသပ်လိမ့်မယ် လှပသောအသေးစိတ် knot နှင့်အတူ လူငယ်များအတွက် Windsord ထုံးကိုမဝတ်ပါနှင့်၊ ဒါကဖက်ရှင်ကျနေပြီ။ လည်စည်းအရှည် belt buckle ရဲ့အမြင့်ကိုရောက်ရမယ် ဖြောင့်နေသရွေ့ ဒီဝတ်ပုံစားပုံအကြောင်းအသေးစိတ်သိဖို့ငါတို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုရှာကြည့်ပါ။ကြော့ရှင်းစွာဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ"။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » ထက်မြက်သောယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ